NLD အမတ်လောင်း ကိုထိုက်ဇော်ရဲ့ ဇနီးရေးတဲ့စာ… – စွယ်စုံသုတ
NLD အမတ်လောင်း ကိုထိုက်ဇော်ရဲ့ ဇနီးရေးတဲ့စာ…
သွားနင့်တော့ယောက်ကျားရေ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးမှာ ရှင်အခုလိုသွားရလိမ့်မယ် မထင်မိဘူးတော်… ၈၈ကစလို့ ရှင့်အရင် ဒီမိုကရေစီရဲဘော်တွေ ရောက်နှင့်ခဲ့ကြပြီလေ။ ဒီ နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရဖို့ အသက်ပေးခဲ့ကြရသူတွေဒုနဲ့ဒေးတဲ့ ခုတော့ ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ ပေါ့ ကျုပ် ရင်ဘက်ကြီးနဲ့ အတွေ့ပေါ့တော်… ကျုပ်ထင်တာက ဒီမိုကရေစီအပင်လေး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီပေါ့….
ရောင်နီထွန်းပြီပေါ့…. ကိုထိုက်ဇော်… အခုတော့ ဘယ်နယ့်ဟုတ်စ… ဒီမိုရဲဘော်တွေပြောတဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ နွဲးနေရတုန်းပါ့ တော် ခုတော့ရှင်က ကျဆုံးရဲဘော် ကျုပ်က မုဆိုးမ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မုဆိုးမ ဒီမိုကရေစီ ရဲဘော်ရဲ့အိမ်သူ ဒီမိုကရစေီမုဆိုးမ ကျုပ်ဂုဏ်ယူပါ့မယ်တော်….
ဒါပေသိ ကျုပ်မျက်ရည်တွေ ကျနေတာ ထိန်းမရဘူး… ဘယ်နယ့် နာလိုက်တဲ့ အသည်း ရက်စက်လိုက်ကြပါဘိ… အခု ရှင့်သားလည်းငိုနေတယ် ကိုထိုက်ဇော် သူ့လက်တွေဖျစ်ညစ် အံကြိတ်လို့ သူကြိတ်ငိုနေတယ်…. သူကျတဲ့မျက်ရည်တွေကို ကျုပ်အမေ မခံစားနိုင်ဘူး နာလိုက်တာတော် ကျုပ်ရင်တွေသာကွဲးပါစေ
ကျုပ်သားလေး ရင်နာမဆုံး ခံစားနေတာ ကျုပ်မမြင်ရက်ဘူး.. ရှင့်အဖြစ်ကိုမြင်ပြီး ရှင့်သားလေးကြောက်သွားမလား ကျွန်မတွေးပူတယ် ရင်ထဲကပြောလိုက်ချင်မိတယ် သားရေ အမေတို့လို ရင်ကွဲးခံစားမျက်ရည်ကျရသော ဒီမိုရဲဘော်မိသားစုတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိခဲ့ကြတယ် ဒုနဲ့ဒေး ရှိခဲ့ကြတယ် သူတို့တွေလည်းခုလိုပဲ ပေးဆပ်ခဲ့ကြရပြီးပြီသားရေ သားအဖေအတွက်ဂုဏ်ယူလိုက်ပါလို့…
ပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် ကျွန်မရင်နာလို့ စကားတွေအစား မျက်ရည်တွေသာစီးလာခဲ့ပြီ.. ရှင်လည်း ပြောနိုင်ရင် ထပြောပေးပါအုံး ရှင့်သားမျက်ရည်တွေကို ကူသုပ်ပေးပါအုံး….. ကျွန်မ ရင်နာနာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ် ရှင်သားလိုလူငယ်တွေ ကျွန်မလို မိန်မသားတွေ ရှင်တို့လိုရဲဘော်တွေ နောင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမခံစားရဖို့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲထဲ ခေတ်ဝန်ထမ်းလို့ရုန်းပါ့မယ် သွားနင့်လိုက်တော့ ကိုထိုက်ဇော်…
ခေတ်ဝန်ကိုထမ်းခဲ့ပေမယ့် လူ့သဘောက်ကြောင့် ရှင်မရောက်ခဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်း ပို၍ထမ်းဖို့ ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်မယ် ရှင် စိတ်ချပြီးသာ သွားနှင့်လိုက်တော့နော်…..။
တာချီလိတ်မြို့တွင် လမ်းခင်းသည့် ကျောက်မှုန်များထဲတွင် ရွှေပါဝင် သည်ဟုဆိုကာ လာရောက်ကော က် ယူနေကြ
သဘာဝဘေးကပ်ဆိုးကြီး ကြုံရဖွယ်မြင်တယ် – ၀ိညာဉ်များနဲ့စကားပြောသူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်က ဟောကိန်းထုတ်